Home Wararka Qoorqoor oo loo diray Qoraal looga Dalbanayo inuu soo magacaabo Musharixiinta Aqalka...
Qoorqoor oo loo diray Qoraal looga Dalbanayo inuu soo magacaabo Musharixiinta Aqalka Sare
Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) ayaa laga dalbaday inuu soo gudbiyo musharixiinta Aqalka Sare ee laga soo doorto Galmudug.
Qoraal kasoo baxay Guddiga Doorashada Heer Dowlad Goboleed ee Galmudug ayaa si toos ah loogu diray Madaxweyne Qoorqoor oo noqonaya madaxweynihii saddexaad ee hela dalabkaasi, lana filayo inuu qabto doorashada Aqalka Sare.
Guddoomiyaha Guddiga Doorashada Galmudug ayaa qoraalkiisa ku sheegay inay diyaar u yihiin qabashada Doorashada, ayna ka codsanayaan madaxweynaha Galmudug inuu soo gudbiyo liiska magacyada musharixiinta Aqalka Sare.
Galmudug ayaa laga soo doortaa 8 ka mida senatoorada Aqalka Sare, waxaana musharixiinta u tartamaya kuraastaasi soo magacaaba ama soo xula madaxweynayaasha maamul Goboleedyada.
Previous articleDagaal culus oo ka socda qaybo kamida Galmudug
Next articleDoorashada waa Dagaal Ma Hurto Haddaan Fahad iyo NISA laga Saarin, RW Rooble Ha Ogaado.
Hoggaamiyihii lasumeeyay ee Russia oo xaladiisa soo hagaageyso
Xassan Shiikh oo Fariin culus u diray Farmaajo iyo kheeyre (Aqriso)